Paasworrdiin Feesbuukii miliyoonaan lakkaa'amu hojjetootaan beekame - BBC News Afaan Oromoo
Paasworrdiin Feesbuukii miliyoonaan lakkaa'amu hojjetootaan beekame
Paaswoordiin fayyadamtoota feesbuukii miliyoonaan lakkaa'aman hojjetoota toora neetwoorkii miidiyaa hawwaasummaa kana irra hojjetan 20,000 ta'aniin akka banamuun danda'ame gabaafamaa jira.
Qorataan nageenyaa kan ta'e Brain Krebs, oduu waa'ee eegumsi daataaf ta'uu malu cabuu isaa futaafachiiseera. Eegumsa daataa ta'uu mala cabee jennaan paaswoordota kan jecha salphaan kuufame gara miliyoona 600 ta'anitu argama jedhameera.
Paaswoordiin akka bahee mullatu ta'an kunneen gara duubaatti deebiyee kan bara 2012 dabalata jedhameera.
Hogganaan Feesbuukii komii Tiraamp balaalessan
Feesbuukiin yeroo kamu caalaa tajaajilli isaa addan cite ture
Kaambiriij anaalitikaa cufamaa jira
Ibsa baaseen, Feesbuuk akka jedhetti 'rakkoo' akka paaswoordonni kunneen neetwoorkii keessoo isaatti kuufaman argamu taasise fureera.
Akka ifatti saaxileen Obbo Krebs kan jedhe, "eegumsi nageenyaa/icciitii) akka cabeeru" maddeen Feesbuukii isatti himaniiru. Kun ammoo akka warreen achi keessa guddisuuf hojjetan osoo koodii itti hin baasiin appilikeeshinii itti seenanii kuusanuu uumuu danda'an isaan dandeessiseera.
Oduu waa'ee Feesbuukii Obbo Krebs jedhu kana irratti yaada kennuun, erga Feesbuukiin kuusaa sana mul'iseen booda qorannoo keessaa jalqabamee, "mallattoon akka malee fayyadamuu" kamiyyu akka hin jirre agarsiiseera jedhan Scott Renfro.
Yaada ifatti kenneen, Feesbuukuun rakkoo kana wayita qorannoo nageenya/icciitii eeguu sakata'u idilee ji'a Amajjii keessa taasisetti ture kan bira ga'e.
Kanaaf, qorannoon akka agarsiisutti namoonni garri caalaan rakkoo kanaan kan miidhaman warra Feesbuuk Lite kan biyyoota rakkoon neetwoorkiin keessa jirutti fayyaduun dhimma ba'anitu ture.
"Nuti akka tilmamnutti, fayyadamtoota Feesbuukiii Lite miliyoonota dhibbaan lakkaa'aman, fayyadamtoota Feesbuukii biroo miliyoonota kurnaniin lakkaa'aman, akkasumas fayyadamtoota Inistaagiraamii kumaatamaan lakkaa'aman beeksisuuf jiirra," jechuun kampaanichi Reuters'tti himeera.
Garuu akka paaswoordii irra deebiyanii galchan kan hojiirra akka ooluuf gaafannu yoo gareen rakkoo kana akka furuuf ramadame paaswoordiin ittiin seenan mul'atee akka maleetti hojii irra ooluu kan mul'isu yoo ta'e qofaadha jechuun itti dabalee ibseera.
28 Fuulbaana 2017
Facebook: Feesbuukiin tajaajiilli isaa addaan cituun kun seenaa keessatti isaa hammaataadha
'Ajjechaa jumlaa' irratti lubni Aksuumirraa dhiyaate kan sobaatii?
Daqiiqaa 13 dura
Daa'ima qaroo-dhabeessa ganna sagalii Yaman keessatti daa'imman barsiisu
Garee beektota Musliimaa Keep Taawon yakkarraa qulqulleessaa jiran
Kitaaba dagaagina sammuu ijoolleef ooge Malkaa Og-Afaan Oromoo
Adwaa: Seenaa gootummaa ilaalcha bara kolonii jijjiire
Yeroo dhuma kan haaromfame: 2 Bitooteessa 2020
Nagaa eegsistota Itoophiyaa biyyatti deebi'uu didan